နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် မြေ၀ယ်ယူခွင့်ရှိသလား? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် မြေ၀ယ်ယူခွင့်ရှိသလား?
2 Dec 2019 1:00 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
4562 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
၁၉၈၇ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများအား မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရောင်းချခြင်း၊ ၀ယ်ယူခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေးကမ်းသည်ကို လက်ခံခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေါင်နှံသည်ကိုလက်ခံခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း (သို့) အခြားနည်းတစ်ရပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်း ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းသည်ကို လက်ခံခြင်း မပြုရ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်ကျခံရမည့်အပြင် အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကို နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအမည်ဖြင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်သည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ၀ယ်ယူခွင့်မရှိပါဘူး။
အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအမည်ဖြင့် ၀ယ်ယူပါက နောက်တစ်ချိန်တွင် ပြသာနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာနိုင်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်လာခြင်းအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်မှာလည်း အထက်ပါအတိုင်း အရေးယူခံရနိုင်သည့်အတွက် မလွယ်ကူလှပါ။ အမည်ခံဝယ်ယူသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားမှသာ ထိုအိမ်နှင့်မြေကိုပိုင်ဆိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တော့ ဤဥပဒေ အရ နိုင်ငံခြားသားများသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ(Condo)များကို ၀ယ်ယူခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေအရ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ ၄၀% ထက်မပိုသော အိမ်ခန်းများကို နိုင်ငံခြားသားများအား ရောင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အိမ်ခန်းဝယ်ယူသူ နိုင်ငံခြားသားသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ(Condo)ကိုသာ တရားဝင်ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခြားမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော အိမ်ခြံမြေများကို ၀ယ်ယူခွင့်မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
၁၉၈၇ခုနှဈ၊ မရှမေ့ပွောငျးနိုငျသညျ့ပစ်စညျး လှဲပွောငျးခွငျးကို ကနျ့သတျသညျ့ဥပဒအေရ နိုငျငံခွားသားမြားအား မရှမေ့ပွောငျးနိုငျသောပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ရောငျးခခြွငျး၊ ဝယျယူခွငျး၊ ပေးကမျးခွငျး၊ ပေးကမျးသညျကို လကျခံခွငျး၊ ပေါငျနှံခွငျး၊ ပေါငျနှံသညျကိုလကျခံခွငျး၊ လဲလှယျခွငျး (သို့) အခွားနညျးတဈရပျဖွငျ့ လှဲပွောငျး ခွငျး၊ လှဲပွောငျးသညျကို လကျခံခွငျး မပွုရ။ ထိုသို့ပွုလုပျပါက ထောငျဒဏျ(၃)နှဈမှ (၅)နှဈကခြံရ မညျ့အပွငျ အခငျြးဖွဈပစ်စညျးကို နိုငျငံ့ဘဏ်ဍာအဖွဈ သိမျးဆညျးခွငျးခံရမညျဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ နိုငျငံခွားသားတဈဦးအမညျဖွငျ့ မရှမေ့ပွောငျးနိုငျသောပစ်စညျးဖွဈသညျ့ မွနှေငျ့အိမျကို ဝယျယူခှငျ့မရှိပါဘူး။
အကယျ၍ မွနျမာနိုငျငံသားတဈဦးအမညျဖွငျ့ ဝယျယူပါက နောကျတဈခြိနျတှငျ ပွသာနာတဈစုံတဈရာဖွဈလာနိုငျပွီး ထိုသို့ဖွဈလာခွငျးအပျေါ အရေးယူဆောငျရှကျရနျမှာလညျး အထကျပါအတိုငျး အရေးယူခံရနိုငျသညျ့အတှကျ မလှယျကူလှပါ။ အမညျခံဝယျယူသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမှသာ ထိုအိမျနှငျ့မွကေိုပိုငျဆိုငျသညျ့ အနအေထားဖွဈပါသညျ။
၂၀၁၆ခုနှဈတှငျ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံဆိုငျရာဥပဒကေို ပွဌာနျးပွီးနောကျပိုငျးတှငျတော့ ဤဥပဒေ အရ နိုငျငံခွားသားမြားသညျ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံ(Condo)မြားကို ဝယျယူခှငျ့ရရှိပွီဖွဈပါသညျ။ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံဆိုငျရာဥပဒအေရ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံ၏ ၄၀% ထကျမပိုသော အိမျခနျးမြားကို နိုငျငံခွားသားမြားအား ရောငျးခနြိုငျခှငျ့ရှိသညျ။ အိမျခနျးဝယျယူသူ နိုငျငံခွားသားသညျ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံ၏ သကျတမျးကာလအတှငျး ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိမှာဖွဈပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ နိုငျငံခွားသားမြားအနဖွေငျ့ စုပေါငျးပိုငျအဆောကျအအုံ(Condo)ကိုသာ တရားဝငျဝယျယူ ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈပွီး အခွားမရှမေ့ပွောငျးနိုငျသော အိမျခွံမွမြေားကို ဝယျယူခှငျ့မရှိကွောငျး ရှငျးလငျးအကွံပွုအပျပါသညျ။
ဥပဒေ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အဆောက်အအုံ မြေ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူ
35 သိန်း (ကျပ်)
720 သိန်း (ကျပ်)
ပြည်ကြီးတံခွန် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Room rental in Royal Thiri Condominium